Jereo ny Piero della Francesca Frescoes
Eoropa Italia Tuscany
Jereo ny Piero Della Francesca Frescoes ao Arezzo
Ny Legendan'ny Tsiambaratelo True Circuit Fresco mitsidika vaovao
Ny mahita ny Piero della Francesca frescoes, ilay Legendan'ny Hazokely True , dia zava-dehibe amin'ny fitsidihana ny tanànan'i Tuscan any Arezzo . Piero della Francesca dia iray amin'ireo mpanao sary sokitra ambony Renaissance ary i La Leggenda della Vera Croce (Legendan'ny True Cross) no heverina ho sangan'asany ary iray amin'ireo sary mihetsika Renaissance ambony any Italia.
Legendan'ny Fivarotam-potoana True True Information
Ny fiangonana San Francesco , San Francesco, basilica di San Francesco , dia niorina ireo frescoes malaza Piero della Francesca.
Hitanao ny fiangonana faha-14 tamin'ny taonjato faha-12 ao Arezzo, eo amin'ny antsasaky ny eo anelanelan'ny gara sy katedralina. Na dia vita tamin'ny biriky sy vato fotsiny aza ny fasadia, dia misy marika mahafinaritra ahitana mpanakanto marobe antsoina hoe Piero della Francesca. Ny Legendan'ny sarimihetsika mahazatra Fresco dia ao amin'ny Cappella Maggiore eo anoloan'ny fiangonana. Azonao atao ny mahita ireo frescoes avy ao am-piangonana fa mba hijery akaiky dia mila mividy tapakila.
Alefaso any ambanin'ny rindrina mankany amin'ny ilany havia ny varavaran'ny fidirana amin'ny biraon'ny fiarakaretsaka (misy sombin-javatra momba ny frescoes eo an-tampon'ilay tohatra). Ny fitsidihana dia 30 minitra farafahakeliny ary 25 monja ny mpitsidika ihany no mahazo alalana.
Hours: Mon - Fri, 9:00 - 18:30, Sa 9:00 - 17:30, Masoandro sy fialantsasatra, 13:00 - 17:30.
Taratasy: amin'ny fotoanan'ny fanoratana 8 euro na 12 euro ho an'ny tapakilam-pifaneranana ahitana ny Casa Vasari, Museum Medieval Art, ary ny Tranombokin'ny Arkeolojia.
Famandrihana (ilaina, na dia afaka mandeha any amin'ny biraon'ny tapakila aza ianao ary mitokana mandritra ny andro iray).
Tsidiho ny tranokalan'i Piero della Francesca ao amin'ny Basilica San Francesco amin'izao fotoana izao sy ny vidiny.
Piero della Francesco Art any Tuscany
Piero della Francesco dia teraka tany Sansepolcro tamin'ny 1420. Ny tranombakoka Sansepolcro (misokatra 9.30-13.00 sy 14.30-18.00) dia manangana ny roa amin'ireo asa-tanana lehibe nataony, ny Madonna della Misericordia ary ny Fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty .
Ny iray amin'ireo frescoes ao aminy dia ao amin'ny Duomo ao Arezzo. Ao amin'ny Monterchi eo akaiky, ianao dia afaka mahita ny Madonna del Parto na Madonna miasa. Ny Galerie Uffizi ao Florence ihany koa dia mihazona ny iray amin'ireo sary hosodoko.
Fitsidihana an'i Arezzo
Ny tanànan'i Arezzo dia any amin'ny faritra atsinanan'i Tuscany eo akaikin'ny sisin-tanin'i Umbria ary azo atomboka amin'ny lamasinina - jereo ny sarintanin'ny lalamby Tuscany . Vitsy dia vitsy ny mpizahatany noho ny tanàna sasany any Torkia, nefa mendrika hanaovana fitsidihana. Ilay kianja tsara tarehiny tsara tarehy dia nampiasaina tamin'ny filalaovana ny sarimihetsika Roberto Begnini, Life is Beautiful .
Ny divay Casentino sy ny làlana kilometatra dia mivoaka avy ao Arezzo ary azo jerena amin'ny fiara.
Toerana vaovao any Tuscany
Ny toerana miavaka indrindra 10 any Toskana
La Sanctuary La Verna sy tranombakoka tao Tuscany
Lucca Travel and Tourism Guide
Fahaizana filalaovana haingam-pandeha ao Oklahoma City
Ny kilalao 8 tsara indrindra mba hividy amin'ny 2018
Mila Visa ho an'ny UK ve ianao?
Kayaking any Washington, DC
Adams Morgan - Washington, DC neighborhood
March Madness ao New Orleans
Zava-mahatalanjona atao amin'ny alina amin'ny fahavaratra amin'ny alina ao San Diego
Ireo havoana 7 any San Francisco
12 Villa Gorgeous Hotels ao Goa
Laurier Avenue West: Luxury Shopping ao amin'ny Montreal Strip
Santa Fe, Nouvelle-Meksika: Torolàlana ho an'ny Diakona Luxury ho an'ny tanjona Amerikanina lehibe
Ahoana ny amin'ny Babyproof Your Room Room
Top 5 Disney World Rides and Attractions for Kids Big